पुराना नेताहरू कता हराए ? | गृहपृष्ठ
Home १० वर्ष अघि पुराना नेताहरू कता हराए ?
कांग्रेसका पुराना नेता मार्सल जुलुम शाक्य २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले कु गरेदेखि नै आन्दोलनमा सशक्त योद्धा थिए । पञ्चायत ढलेपछि आफ्नै नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारमा १३ महिना मन्त्रीसमेत बने । तर, त्यसपछि उनी राजनीतिबाट बेपत्ता भए । अहिले उनी कहाँ छन् कांग्रेसका नेताकार्यकर्तालाई थाहा छैन । ‘म यहीँ छु’ शाक्य भन्छन्, ‘कांग्रेसभित्र परिवारवाद हावी भएपछि त्यहाँ टिक्न सकिन । अहिले सामान्य समर्थक भएर बसेको छु ।’ शाक्य अचेल आफूलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको रूपमा भन्दा पनि सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा चिनाउन चाहन्छन् ।
पञ्चायत विरोधी आन्दोलन गर्दा १७ वर्ष जेल जीवन बिताएर नेपालको नेल्सन मन्डेलाको उपाधि पाएको मोेहनचन्द्र अधिकारी अहिले औपचरिकताका लागि मात्रै राजनीतिमा छन् । अर्थात् उनी अहिले नेकपा एमालेको केन्द्रीय सल्लाहकार त छन् तर त्यसबाहेक उनको भूमिका केही छैन । न त सल्लाहकारको रूपमा उनले दिएको सल्लाहलाई नै पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिन्छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघका संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्वस्वास्वास्थ्य मन्त्री विपिन कोइराला भने आफू कोइराला भएकै कारण पछाडि परेको निष्कर्षमा पुगेका छन् । अहिले कोइराला परिवारमा ए, बी र सी ग्रेडका नेताहरू रहेको बताउँदै केही महिना अगाडि एउटा साप्ताहिक पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा कोइरालाले भनेका छन् । ‘आफूलाई ए ग्रेडको कोइराला भन्नेहरूको घरमा राजनीति गर्नेहरू धेरै भएपछि हामीजस्ता सी ग्रेडका कोइरालाहरू पछाडि पर्नु स्वाभािवक हो ।’ कोइरालाजस्तै कांग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा लामो समय सक्रिय रहेका ओमकार श्रेष्ठ, योगप्रसाद उपाध्याय, बद्रीनारायण बस्नेतहरू अहिले गुमनाम भएका छन् ।
त्यस्तै जीवनको अधिकांश समय सक्रिय वामपन्थी आन्दोलनमा बिताएका केशवलाल श्रेष्ठ, वर्मन बुढा, मुमाराम खनाल लगायतका धेरै नेता अहिले केन्द्रीय राजनीतिबाट पर पुगेका छन् । यसमध्ये एमालेको तर्फबाट विगतमा मन्त्री र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएका केशवलाल अहिले पार्टीको भ्रातृसंस्था अखिल नेपाल किसान संगठनकोे उपाध्यक्षमा सीमित छन् ।
वर्ष ३, अंक १६, २०६४, पुस ९–१५